Home News Wararkii Ugu Dambeeyay Weerar ka dhacay Boosaaso!!
Sida ay sheegayaan wararka inaga soo gaaraya magaalada Boosaaso ee xarunta Gobolka Bari weerar loo adeegsaday bambo gacmeed ayaa lagu qaaday bar Kontorool ah oo ay ku sugnaayeen Ciidamo ka tirsan Maamulka Puntland.
Koox hubeysan ayaa Bambo gacmeed ku weerartay xalay fiidkii bar Ciidan oo ku taalla meel ku dhow Dekeda Magaalada Boosaaso, kadib waxaa goobta ka baxsaday Dableydii weerarka geysatay.
Ciidamada goobta ku sugnaa ayaa afarta jiho u riday rasaas fara badan oo ay kaga jawaabayeen weerarka lagu soo qaaday, Ciiddamo kale oo dheeraad ah ayaa gaaray halkaasi oo ilaa hadda ay ka socdaan Howlgallo ammaanka lagu xaqiijinayo.
Inta la xaqiijiyay Hal Askari iyo qof shacab ah ayaa geeryooday, waxaa kaloo dhaawac uu soo gaaray Saddex qof shacab ah, iyada oo dadkii dhaawacmay durba loo qaaday goobaha caafimaadka.
Bartamaha magaalada Boosaaso shalay xilli dharaar cad ah waxaa lagu toogtay ilaa Saddex qof oo midi uu Askari ahaa, masuuliyadda dilkaasi waxaa sheegtay xoogaga ururka Al-shabaab.
Ammaanka magaalada Boosaaso ayaa maalmahan ah mid faraha ka sii baxaya, kadib markii ay kordheen dilalka qorsheysan ee ay geysanayeen ururka Al-shabaab.